Mobile Apps - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Nhare Yekushandisa Yekuvandudza Sevhisi
famba kuvandudza kweApp inzira yekuvaka Mobile mafomu iyo inomhanya pane nhare mbozha. Aya maapplication anogona kunge akafanogadzwa-kuiswa kana kurodha pasi uye kuiswa nemushandisi gare gare. Ivo vanoshandisa iyo network kugona kweye mudziyo kushandira komputa zviwanikwa zviri kure. Nekudaro, iyo nharembozha yekuvandudza maitiro inoda kugadzira software inogona kuiswa pane chishandiso, uye ichigonesa backend masevhisi ekuwana dhata kuburikidza nemaAPI, uye kuyedza iko kunyorera pane tarisiro zvishandiso. zvido zvehardware, uye zvimwe zvakawanda zvezvinhu zvekuvandudza kweapp.
Mobile Mapurogiramu Ekuvandudza
Iwo maviri akakosha mafoni mapuratifomu eApple kubva kuApple Inc. uye Android kubva kuGoogle. iOS ndeye Apple's inobata nharembozha inoshanda sisitimu yakavakirwa zvakananga maPhones. Android, zvisinei, inomhanya pane nhare mbozha inogadzirwa nemaOEMs akasiyana siyana, kusanganisira Google. Kunyange paine zvakawanda zvakafanana pakati pezviviri, zvisinei akasiyana software yekuvandudza kits (SDKs) anoshandiswa kune akasiyana mapuratifomu. Apple inoshandisa iOS zvega zvemidziyo yavo, nepo Google yaita kuti Android iwanikwe kune mamwe makambani anosangana nezvinodiwa. Vagadziri vakavaka pamusoro pe 1.5 mamirioni ekunyorera kune ese mapuratifomu kusvika zvino.
Iwe unogona kuswedera kune mobile app kuvandudza munzira ina dzakasiyana:
Vaka maNative Mobile Zvikumbiro
Gadzira Muchinjikwa -Puratifomu Native Nyore Mafomu
Gadzira Hybrid Mobile Zvikumbiro
Gadzira Progressive Web Zvikumbiro